२० मिटरको दूरीमा प्रहरीहरु क्यारेमबोर्ड खेल्दै थिए, उनीहरुकै आँखा अगाडि शरद गौचनलाइ गोलि ठोकियो – प्रत्यक्ष दर्शी ( फोटोफिचर ) – Digital Newspaper
२० मिटरको दूरीमा प्रहरीहरु क्यारेमबोर्ड खेल्दै थिए, उनीहरुकै आँखा अगाडि शरद गौचनलाइ गोलि ठोकियो – प्रत्यक्ष दर्शी ( फोटोफिचर )
असोज, काठमाडौं । भरत रम्तेलको मोटरसाइकल वर्कशप छ, नयाँ बानेश्वरको शान्तिनगर चोकनजिकै प्रयागमार्ग चोकमा । उनी सोमबार अपरान्ह आफ्नै युआर मोटरसाइकल वर्कशपमा पल्सर बाइक मर्मत गर्दै थिए । उनको वर्कशपकै अगाडि एउटा जीपमा ईंटा प्रहार गर्दै एक युवक ओमशान्ति चोकतिर दौडिए ।
किन गाडीमा ढुंगा हानेको होला भनेर हेर्दाहेर्दै पटाका पड्केको जस्तो अवाज आयो । आवाजतिर फर्किंदा गाडीको अगाडि सीटमा बसेका व्यक्तिको टाउको गोली लागेर लत्रिसकेको थियो । बा १३ च ४९४८ नम्बरको ल्याण्ड क्रुजर गाडीको सिसा क्षतविक्षत भएको थियो भने गोलीले अगाडिकोे सिसामा दुईवटा दुलो पारेको थियो ।
ढुंगा हान्ने व्यक्ति र गोली हान्ने व्यक्ति अलग-अलग बाटोतिर दौडिए । गाडीका चालकले आत्तिएर रुँदै फोन लगाउन थाले । वरिपरि पसलका व्यक्तिहरु जम्मा भएर चालकलाई अस्पतालतर्फ गाडी मोड्नू भन्दै कराउन थाले । त्यतिञ्जेल घरका मान्छे पनि अर्को गाडी लिएर आइपुगे ।
करीव ५/७ मिनेट चलेको यो अत्यासपछि पत्ता लाग्यो, गाडीभित्रै गोली लाखेर लत्रिसकेका व्यक्ति सोही टोलका बासिन्दा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचन रहेछन् ।
दुई गोली लागेर अत्यधिक रक्तश्राव भइसकेको अवस्थामा गौचनलाई अर्को गाडीमा राख्न नमिल्ने भएकाले सोही गाडीमा सिभिल अस्पतालतर्फ लगियो ।
अस्पताल पुर्‍याएको केहीबेरमै खबर सनसनी बन्यो- गोली लागेका शरद गौचनको मृत्यु भयो ।
घर र घटनास्थलको दूरी
एक मिनेटभित्र गाडीमा अगाडिबाट गाडीमा ढुंगा हान्ने र छेउबाट लगत्तै गोली हान्ने दुवै घटना गराएर मास्क लगाएका दुई आक्रमणकारी फरार भइसकेका थिए । त्यो क्षण सम्झिँदै रम्तेलले अनलाइनखबरसँग भने- के भएको हो भन्ने सोच्न नपाउँदै गौचन ढलिसकेका थिए ।
अपरान्ह ३ बजे शान्तिनगर चोकस्थित घरबाट बाहिर निस्किएका निर्माण व्यवसायी गौचनमाथि ३ सय मिटर दूरी नकट्दै आक्रमण भएको थियो । गौचनको घर भएको ओम शान्ति चोक र हत्या भएको प्रयागमार्ग चोकबीचको दूरी मुस्किलले तीन सय मिटर पनि छैन ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशको घर छेउमै गोली चल्यो
यी दुई चोकको बीचमा अर्थात गोली लागेको चोकमा पुग्न २० मिटरजति अगाडि सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको घर छ । उनको घरमा नेपाल प्रहरीको एउटा डफ्फा सुरक्षामा खटिएको छ । गोली चलेका बेला पोष्टको ड्युटीमा थिए प्रहरी जवान-टेकबहादुर शाही ।
अनलाइनखबरकर्मीसँग कुरा गर्दै शाहीले भने- म पोष्टमा थिएँ । अरु साथीहरु भित्र क्यारेमबोर्ड खेल्दै थिए । एक्कासी पटाका पड्किएको आवाज आयो । लगातार दुईपटक पड्किएपछि पटाका होइन जस्तो लाग्यो । हामी दौडिएर चोकमा पुग्दा मान्छेको भीड जम्मा भइसकेको थियो, गोली लागेका व्यक्ति लल्याकलुलुक भएर मुन्टो तल झरिसकेको थियो ।
अनिष्ठको आवाजमा भुके कुकुर
गोली चलेको आवाजसँगै टोलका कुकुर भुकेपछि अनिष्ठको आभास भयो सियोन व्युटी पार्लरकी माया राईलाई । उनको बुझाइमा पटाका पड्किँदा यसरी विश्मयकारी ढंगले कुकुर भुक्ने गर्दैनन् । जुन ढंगले कुकुर भुके, त्यसले उनीहरुलाई घटनास्थलतिर दौडायो ।
गौचनको गाडीमा ढुंगा हान्ने व्यक्ति कात्यायानी चोकतिर भागेको देखेका रम्तेलले गोली हान्ने व्यक्ति ओमशान्ति चोकतिर भागेको बताए । गोली हान्ने व्यक्तिले गुलाबी रंगको ज्याकेट लगाएको थियो । ढुंगा हान्नेले कालो रंगको ज्याकेट लगाएको उनले बताए ।
गाडीको अगाडि सिसामा ढुंगा-ईटा प्रहार भएपछि सबैको ध्यान त्यतै मोडियो । त्यही बेला गुलाबी ज्याकेट लगाउने व्यक्तिले पिस्तोलबाट दुई गोली प्रहार गरेको थियो । गाडीको अगाडि सीटमा बसेका गौचनको पेटमा गोली लागेपछि उनी अचेत भइसकेका थिए ।
पाँचबाटोमा भयो आक्रमण
गौचनको घर अगाडि शान्तिनगर चोकमा ठूलो चौर र खाली जग्गा छ । त्यहाँबाट ओमशान्ति चोक, शान्तिनगर गेट र प्रयागमार्ग हुँदै खरिबोट जाने तीनवटा बाटा छन् ।
आखिर आक्रमणकारीले घर अगाडि उनीमाथि आक्रमण नगरी प्रयागमार्ग नै किन रोजे ?
निकै योजनावद्ध ढंगले गरिएको गौचनको हत्या लामो तयारीपछि भएको बुझ्न सकिन्छ । घरै अगाडि उनीमाथि आक्रमण नगरी प्रयागमार्गको अप्ठेरो र व्यस्त चोकमा हमला गरिएको छ । आक्रमणकारीले भाग्नका लागि ५ वटा सहायक सडक र एउटा गल्ली रहेको चोक छनौट गरेको देखिन्छ ।
आक्रमणमा कसको संलग्नता ?
यो आक्रमणका पछाडि कसको हात छ ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ । तर एउटा कुरा प्रष्ट छ- यसमा ठेक्कापट्टाको लामो रीसइबी, टेण्डर लिने र दिलाउने कुरामा लाभ नपाउने समूहको हात रहेको हुन सक्छ ।
महासचिव हुँदादेखि नै गौचनले ठूला ठेक्काहरुको हात पारेपछि पेशेवर गुण्डाहरुले उनीसँग डाहा गरेको हुन सक्छ । गौचनसँग असन्तुष्ट त्यही समूहले निकै लामो योजना र ठूलो रकम सुपारी दिएर पेशेबर शुटर मार्फत यो घटना गराएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
घटना लगत्तै शरदको घरमा प्ुगेका उनका नातेदार तथा माओवादी नेता अमिक शेरचनका दाजु डीबी शेरचनले ठेकेदारहरुले नै उनको हत्या गराएको आरोप लगाए । उनले भने- ‘हामीलाई यस्तो आभाश पहिले नै भइसकेको थियो, प्रष्टै छ, यसमा ठेकेदारहरुकै हात छ ।’
गौचन हत्याको जिम्मेवारी मनोज पुन समूहले लिएको अपुष्ट हल्ला पनि सोमबार सम्साँझै चल्यो । प्रहरीलाई हवाला दिँदै कतिपयले रमेश बाहुनको समूहलाई पनि यसमा जोडेका छन् । यद्यपि यी हल्लाहरु अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी आशंकाहरु मात्रै हुन् ।
जसले गरेको भए पनि गौचन हत्यामा पेशेवर सार्प सुटरहरुको प्रयोग गरिएको प्रारम्भिक आशंका प्रहरीले गरेको छ, तिनीहरुलाई भारतबाट सुपारी दिएर ल्याइएको पनि हुन सक्छ । अन्यथा क्षणभरमा दिनदहाडै व्यस्त शहरमा गोली चलाएर उनीहरु उम्कन सक्ने कल्पना गर्न सकिँदैनथ्यो ।
हेरौं, अब प्रहरीले केही दिनमा घटनाको रहस्य उजागर गर्ला । समाचार साभार: अनलाइन खबर |
← निर्माण व्यबसायी गौचनको हत्या लगत्तै अर्का व्यवसायी जिपछिरिङलाई ‘त्यस्तै हालत बनाईदिने’ धम्की (फोन वार्ता सहित )
आज अक्टुबर १० तारिक मंगलबार ,आजको बिदेशी कतार साउदी ,मलेसिया लगायत मुद्राको ताजा रेट हेर्नुहोस हिजो भन्दा आज ब्रिदी .. →
हतियारसहित एकाएक परिचालन भयो नेपाली सेना र प्रहरी !
September 16, 2017 nepsnews Comments Off on हतियारसहित एकाएक परिचालन भयो नेपाली सेना र प्रहरी !
गौतमबुद्ध बिमानस्थल निर्माणः ठेकेदारको कार्यशैली अझै सुध्रिएन
July 20, 2017 nepsnews Comments Off on गौतमबुद्ध बिमानस्थल निर्माणः ठेकेदारको कार्यशैली अझै सुध्रिएन
October 12, 2017 nepsnews Comments Off on एसियाकै तेस्रो ठुलो हस्पिटल मेडिसीटी नेपालमा अजबाट सन्चालन ,नेपालीलाई उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने…के के सुबिधा पाइन्छ त ? हेर्नुहोस